Jack Osbourne anorova mukomana mutsva mukadzi akaparadzana, mapurisa anonzi: Report - Nhau
Mapurisa akashevedza mushure mekunge Jack Osbourne abaya mukomana mutsva wemukadzi akaparadzana: Report
Kupatsanurwa kwaJack Osbourne naLisa Stelly hakufadze sezvavakambotaura.
rarama nekelly ratings kudonha
Chirevo chitsva chinotaura kuti Jack akaita chisimba nemukomana mutsva waLisa isingasviki mwedzi mitatu iye akamhan'arira kurambana zvichitevera makore mashanu nehafu emuchato.
Maererano ne TMZ , muna Chikunguru 30, Jack, 32, akazviratidza kumba iye naLisa, 31, vaakambogovana nekuti aida kutaura naye.
Asi zvinhu zvakatora rima, masosi ezvemitemo anotaurira TMZ, apo mukomana mutsva waLisa - uyo TMZ anozvizivisa mutambi-modhi Michael G. Gabel - akazviratidza 'uye akaedza kupindira,' TMZ inotsanangura.
Kudzokera kumashure kuCali. Ndatenda neXmas chena, St. Louis, asi ini ndakapfeka mbatya dzinodziya… Photo: @wes_klain
Chinyorwa chakagovaniswa na Michael G. Gabel (@michaelggabel) pana Dec 30, 2017 pa2: 46 pm PST
'Zvinhu zvakawedzera pakati pevakomana uye Jack akaburitswa ndokurova [mukomana] mumusoro asati abuda mumba. Mapurisa akadaidzwa uye mushumo webhatiri wakatorwa, 'TMZ inonyora.
Chikonzero chakagumbura Jack, masosi padhuze nemamiriro ezvinhu anotaurira TMZ, ndeyekuti aifunga kuti iye naLisa vaive munzira yekugadzirisa hukama hwavo uye kuva mhuri zvakare. Vaviri vaviri ava vane vanasikana vatatu: Pearl, 6, Andy, 3, naMinnie, vakazvarwa muna Kukadzi mwedzi mitatu chete Jack naLisa vasati vaparadzane.
Pakasvika mukomana waLisa pamba, TMZ anotsanangura, zvakashamisa Jack, uyo anoti TMZ 'akazvipira kugadzirisa mamiriro ake naLisa.'
Zviremera hazvizove, asi, zvichizadza chero mhosva nekuti, masosi anoudza TMZ, Michael haadi kumhan'arira mhosva uye Jack anga asingabatane nemapurisa.
zuva regma riri kuita sei muma ratings
Izvi zvitatu zvinoita kuti zvive zvakakosha nguva. #vasikana vangu #vanasikana
Chinyorwa chakagovaniswa na Jack Osbourne (@jackosbourne) musi waMay 12, 2018 na12: 52 am PDT
Kutevera kupatsanurana kwavo muna Chivabvu, Jack naLisa - vanova ivo muvambi uye CEO wekambani yekubheka yekubheka Fancy Sprinkles - vakatumira chirevo chakabatana pamasocial media vachiratidza kuti vese vakazvipira kurambana.
'Saka nhau pamusoro pedu kupatsanura zvimwe dzakauya sekushamisa kune wese munhu. Asi isu tinongoda kuchenesa mhepo uye tigovane newe zviri kuitika. Saka, chekutanga uye chikuru, isu zvachose tichiri kudanana. Mhuri yedu ndiyo inonyanya kukosha muhupenyu hwedu uye isu takaedza zvese zvataigona kwemakore mazhinji kuti tiite iri basa. Izvo zvakanakira mhuri yedu izvozvi ndezvekuti isu tinoparadzanisa nerudo, uye kuramba tiri shamwari dzepamoyo dzinozvipira kurera vana vedu pamwechete, 'vakanyora. 'Takaita makore manomwe akanaka ekuva vaviri, takazadzwa nenguva dzinoshamisa uye tichave nekuonga nekusingaperi kune izvo. Isu zvakare tine vana vatatu vakanaka vatinokoshesa kupfuura chero chinhu. Takanyadziswa asi tinonzwa tine chivimbo chekuti ticharamba tichiwedzera hukama hwedu sevabereki pamwe chete uye shamwari dzepedyo. '
Musikana uyu pano chaipo akakwana. 20 mapaundi eiyo yakachena lovin '#minnieandme # 5monthsold
Chinyorwa chakagovaniswa na Lisa Stelly (@lisastelly) pana Jul 11, 2018 na12: 30 am PDT
Muna Chivabvu, Mukubata magazini inonzi Jack akabiridzira Lisa naKayti Edwards, muzukuru we 'The Sound of Music' nyeredzi Julie Andrews uyo akambonzi akadanana naKid Rock. MuTouch rakaburitsa mufananidzo waKayti naJack paChivanze neMarriott hotera muLos Angeles muna Kubvumbi.
Mazuva mashoma mushure mekuparara kwenhau dzekurambana, a TMZ cameraman akabata Jack naLisa vachienda nevana vavo muStudio City, California. 'Tiri mune izvi zvekutora nguva refu pamwe chete kuti tigoitawo sezvatinogona. Isu takanaka. Tiri kungodhonza peji kubva mubhuku raChris Martin naGwyneth Paltrow, 'Jack akatsanangura, achireva kune vamwe vevaimbova vaviri vaviri vane hushamwari vane mukurumbira, vakura' vanoziva uncoupling 'makore mashoma apfuura.
MunaJune, iyo 'Ozzy & Jack's World Detour' nyeredzi yakaudza Isu Vhiki kuti iye naLisa vaive vachifunga mafambiro mberi. 'Tiri kutakura marori uye ndizvo zvazviri,' akadaro.
Tyra Mabhangi uye mudiwa wake 'zvakanyanya, kwazvo murudo'
Chelsea Handler anotarisana nekumukira Sarah Huckabee Sanders parody
ndiani rapper eve akaroora
lara spencer kwete pane gma
Nei kendra wilkinson ane mukurumbira
bethenny frankel mukomana mukomana dennis nhoo